Ra’isal wasaare ragga ku amaray in shaqada guriga ay qeyb ka qabtaan” | Hangool News
Ra’isal wasaare ragga ku amaray in shaqada guriga ay qeyb ka qabtaan”
Hangoolnews:- Xayiraadihi ka dhashay fayraska corona ee ka dillaacay dalka Hindiya ayaa abuuray dood jinsiga la xiriirto oo ka taagan dalkaas maadaama aysan shaqada guriga u sinneen ragga iyo dumarka, sida ay qortay Geeta Pandey oo BBC Delhi uga soo warranta.
Waxaa la sheegaa in shaqada guriga ee dalka Hindiya in ay tahay mid aad u adag. Si ka duwan waddamada reer galbeedka maada guriyaha dalkaas aysan u dhisneyn qaab sahlan oo fududeynaya in la nadiifiyo iyo dhar dhaqiddaba aan mashiinna loo isticmaalin.
Dumarka Hindiya waxay ku qasban yihiin in alaab kasta ee guriga taallo ay gacantooda ku nadiifiyaan ama ku maydhaan; dharka ayaana ka mid ah.
Malaayiin qoys oo ay noolashooda tahay dhexdhexaad, waxay howlaha guriga u qortaan qof shaqaale ah oo ay mushaar siiyaan. Balse shaqada guryaha ayaa adkaatay, waxayna noqotay mid ay u siman yihiin faqiir iyo taajirba, ka dib markii la soo rogay xayiraadda oo shaqaalaha ay soo bixi waayeen.
“Ha ahaato xaaqidda ama fiiqda ee iskoobbaha ama xaaqiinka loo adeegsado, shirkadaha soo saara qalabkan ma waxay ku qoreen dumarka oo keli ah shaqadan ha qabtaan?” ayaa lagu qoray warqad codsi ah oo lagu dalbanayo in wax laga beddelo arrintan oo lagu daabacay change.org.
“Buugaagta hagaya mashiinnada dharka lagu dhaqo ama gaaska cuntada lagu karsado iyaguna ma sidaasaa? Haddii ay ku qorneen dumarka iney gaar u yihiin shaqooyiinka, raggu waa iney ka qayb qaataan howlaha guriga.”
Waxay dumarka arrintan billaabay sheegayaan in shaqada guryaha aysan ahayn mid dumarka oo keli ah loogu talagalay, sidaa darteedna ragga ay wax ka qabtaan howsha looga baahan yahay.
Haweenka arrintan hoggaaminaya ee dumarka kale ka uruurineysa magacyada iyo saxiixa waxaa madaxu ah Subarna Ghosh oo sheegtay iney ku daashay cunta karinta iyo dhar meydhidda oo raggu aysan gacan ka siinin, iyada oo sheegtay iney dooneyso inuu ra’isal wasaaraha Hindiya, Narendera Modi, uu arrintan ku darsado “khudbaddiisa xigta”, si uu shacabka Hindiya uga dhaadhiciyo in ragga Hindiya ay shaqada guriga haweenka la qaybsadaan.
“Su’aasha taagan waxay tahay, maxaysan dada badan arrintan uga hadleynin?” ayey tiri.
Qoraalka sawirka,Dalka Hindiya shaqooyinka Guriga ayaa loo arkaa mid haweenka u gaar ah
Ms Ghosh ayaa waxay uruurisay ku dhawaad 70,000 oo saxeex oo ay dadka saxeexay ku muujinayaan labada jinsi ee ku nool dalka Hindiya shaqada guriga iney u sinneen.
Sida ay sheegtay warbixin ay sannadkii 2018-kii soo saartay hay’adda shaqaalaha adduunka, dumarka ku nool magaalooyinka Hindiya maalin weliba qabtaan shaqo ah 312 daqiiqo oo aan lacagna lagu siinin. Halka ay ragguna qabtaan 29 daqiiqo oo keli ah. Dhanka dhulka miyigana, dumarka waxay qabtaan 291 daqiiqo oo shaqo ah, ragguna 32 daqiiqo.
Maxaa kala heysta coronavirus iyo jilayaasha filimada ee Hindiya?
Ms Ghosh oo hormuud ka ah hay’adda ka shaqeysa caddaaladda dhalmada, waxay sheegtay iney aad ugu daashay shaqooyinka guriga, gaar ahaanna dalka Hindiya intii ay ka jirtay xayiraadda ka dhalatay coronavirus.
Waxayna sheegtay in maalmo ay shaqada guriga gabi ahaanba iska joojisya ayna sababtay in alaabti guriga iyo dharka wasaqda ah ee dhaqidda u baahan in ay guriga buux dhaafiyeen.
Seygeeda iyo carruurteeda waxay dareemeen in shaqooyinka guriga ay ka qabaneysay iney ka xanaaqday, inkastoo ay markii dambe shaqada guriga iyadu qabatay.
Qoraalka sawirka,Wiil iyo Gabar ay dhashay Subarna Ghosh oo shaqo guri hayo
“Seygeeyga wuxuu billaabay inuu shaqada iga caawiyo. Wuxuuna fahmay iney arrintan culeys wayn igu tahay, runtii aad ayey arrintaasi ii dhibtay,” ayey tiri.
“Balse raggayaga waxay sidoo kale qayb ka yihiin dhaqanka noocan ah ee ay bulshada ku dhaqanto. Raggu malaha tababar ku filan oo howlaha guriga ay ku qabtaan. Waxay u baahan yihiin in waxyar la caawiyo”.
“Carruurnimadayda, markasta aniga ayay ahayd in aan sameeyo shaqooyiinka guriga, inaan ka shaqeeyo jikada oo aan caawiyo hooyaday,” ayey tiri haweeney lagu magacaabo Pallavi Sareen oo fikirkeeda Facebook ka soo dhiibatay. “Walaakeey xataa cuntada aan u kariyay ma soo qaadanayo,” ayey tiri haweeneyd kale.
Cilmi Baaris: “Habaarka ama dhibaatada” sodohda
Haweenka sheegay in ragga ay howsha guriga u siman yihiin, waa qoysaska dibadaha ku soo noolaa ama ragga intooda badan noolashooda ku soo qaatay waddamada reer galbeedka. Balse sheekooyinka la xidhiidha arrimaha qoyska ee Hindiya aad bey u kala duwan yihiin.
Warbixin ay Oxford soo saartay waxay sheegtay in haweenka iyo gabdhaha Hindiya ay maalin kasta qabtaan shaqo ah in ka badan seddex bilyan oo saacadood oo lacag la’aan ah. Haddii saacadahaasi lacag loo beddeli lahaana waxay noqon lahayd dhowr trillion oo lacagta Hindiya oo dhaqaalaha dalka wax weyn ku soo kordhin lahayd.
Qoraalka sawirka,Guriyaha ugu badan Hindiya dharka waxaa lagu meyraa gacanta ceedceedda ayaana qallajisa
Subarna Ghosha waxay tilmaamtay iney aragtay hooyadeed iyo eeddadeed oo shaqada guriga oo dhan qabanaya, “marka anigu ma doonayo in aan sidooda oo kale noqdo”.
Markii ay guursaneysay waxay sheegtay in loo qariyey qayb ahaan shaqada guriga kuee sugeysay iyadoo loo sheegi jiray in markay ay guursato iney seygeeda garab ka heleyso.
“Caawinta howlaha guriga waxay gacan ka geysaneysaa guriga inuu noqdo mid xasiloon,” ayey tiri.
Ka dib waxay diyaarisay codsi loo gudbinaya ra’isal wasaaraha dalka Hindiya inuu arrintan soo farageliyo uu ragga Hindiya ku amro iney dumarka ka caawiyaan shaqooyiinka guriga – sida cunto karinta, dhar dhaqidda iyo howlaha kale.
Haweeney Amerikaan oo lagu “kufsaday” Hindiya
Dumar badan oo ay deris la tahay oo ay la xiriirtay waxay u sheegeen iney shaqada guriga ku daaleen, balse waxay dumarka u xaqiijiyeen in ragu ay howlaha guriga ka caawiyaan haweenka in ay tahay mid aan macquul ahayn.
“Dumar badan waxay i weydiiyeen, ‘sideey ragga cunta u karinayaan ama ay nadaafadda uga qayb qaadanayaa?’, iyaga oo ay dumar badan sheegeen inay aaminsan yihiin in raggooda ay u shaqeeyaan iney sharaf u tahay ayna ku faraxsan yihiin,” ayey tiri.
Qoraalka sawirka,Gabar Hindi ah oo gurigeeda xaaqeyso
Subarna Ghosh waxay sheegtay in markii ay ninkeeda u sheegtay iney billaabi rabto uruurinta saxiixa haweenka taageeraya arrintan si dumarka loga caawiyo shaqada guriga, “si wayn ayuu u taageeray”.
Dhinaca kalana dad badan ayaa cambaareeyey saxiixa ay Ms Ghosh uruurineyso ee ay ku dooneyso in dowladda soo farageliso.
“Dadka qaar farriimo ay ii soo qoreen waxay ku sheegeen inay doonayaan in shaqada guriga ay haweenka sii wadaan. Waa sax wey ku sax yihiin, balse aaway kaalinti ragga?”
Weriyihi ay Ms Ghosh u warameysay ayaa weydiiyey ma rajeyneysaa in Ra’iisul Wasaaraha uu arrimahan guriga wax ka qabanayo?.
“Aad baan ugu rajo weynahay. Mr Modi haweenka taageero aad u badan ayey u hayaan, marka waa inuu ka hadlaa arrintan maadaamaa ay haweenka muhiimad badan u leedahay. Xilliga roobka marka la joogo, wuxuu ka hadlaa hargabka iyo dhaxanta, haddaba muxuu uga hadli la’yahay sinnaanta ragga iyo dumarka ee shaqada guriga?”